Wondershare MobileTrans User Guide - iTunes ndabere ka Android
MobileTrans Guide: iTunes ndabere ka Android
Nzọụkwụ 2. Na Primary Ohere, họrọ "Weghachi si Backups". Na nhọrọ na-enye, họrọ "iTunes" site nhọrọ ọkọnọ.
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị android ngwaọrụ gị na kọmputa na iji eriri cables. Gbaa mbọ hụ na ngwaọrụ a ghọtara site Wondershare MobileTrans.
Nzọụkwụ 4. Họrọ faịlụ ị ga-achọ nyefee si gị iTunes ndabere. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikpochapụ data si ebe ekwentị tupu Iṅomi, ego "Clear data tupu oyiri".
Nzọụkwụ 5. Pịa "Malite Copy" iji malite usoro. Jide n'aka na-na-na ekwentị gị ejikọrọ site dum usoro.
Ọzọ: OneDrive ka Android